काठमाडौंका १० वटा क्षेत्रमा कसले मार्ला बाजी? यस्तो छ मतको लेखाजोखा - Nepal Readers
पार्टी नै एकता गर्ने भन्दै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर भएको छ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरुको गठबन्धन बनेपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने गृहकार्यमा छ। आफ्नो गठबन्धनमा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिकसहित मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई समेट्ने कांग्रेसको तयारी छ। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्पष्टरुपमा दुई गठबन्धन मैदानमा देखिने भएपछि यसको परिणाम के होला भन्ने चासो आमजनमानसमा व्याप्त छ। आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणाम कस्तो होला त? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तै पनि हालै भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई विश्लेषण गरेर थोरै अनुमान भने लगाउन सकिन्छ।
यसैक्रममा हामीले देशको राजधानी तथा मुलुककै सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला काठमाडौंमा दलहरुले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा कुन क्षेत्रमा कुन गठबन्धन अगाडि होला भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं। यसका लागि गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरुले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानिएको छ। एमाले र माओवादीबीच तालमेलको औपचारिक घोषणा भइसकेकाले उनीहरुको मतलाई एकसाथ जोडिएको छ।
नयाँ शक्तिले अधिकांश वडामा उम्मेदवारी दिएको थिएन। फोरमसँगको तालमेलमा नयाँ शक्तिका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्यले प्राप्त गरेको करिब ६ हजार मत यस तथ्याङ्कमा जोडिएको छैन। महानगरको कुनै न कुनै वडा जिल्लाका १० मध्ये ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ।
अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहने भनिएका अन्य दलको राजधानीमा खासै प्रभाव नरहेकाले कांग्रेस र राप्रपाको मत मात्र जोडिएको छ।
काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११, २९ र ३१ पर्छ। यो क्षेत्रलाई कांग्रेसको बलियो जनाधार भएको क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ। यो कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहको निर्वाचन क्षेत्र हो।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा देश माओवादीमय भएका बेलासमेत प्रकाशमान यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। २०७० मा पनि उनी भारी मतान्तरले विजयी भए।
यो क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र ३२, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा शंखरापुर नगरपालिका पर्छ। यो वामपन्थी जनमत बलियो भएको क्षेत्र हो।
२०६४ मा माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदीले यस क्षेत्रबाट एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई पराजित गरेका थिए। तर, २०७० को निर्वाचनमा नेपाल निर्वाचित भए। उनले रौतहटबाट पनि चुनाव जितेकाले काठमाडौं २ छाडे। यहाँ उप-निर्वाचन भयो र कांग्रेसका दीपक कुइँकेल विजयी भए। कुइँकेल काठमाडौं २ का बहालवाला सांसद् हुन्।
कांग्रेस – १५ हजार
६२७ राप्रपा – ४ हजार ८५४
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिका मिलेर काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बनेको छ।
यो क्षेत्रमा २०६४ मा कांग्रेसका चक्रबहादुर ठकुरी विजयी भएका थिए। त्यतिबेला उनले एमालेका रामेश्वर फुँयाललाई पराजित गरे। २०७० को निर्वाचनमा एमालेले बाजी मार्‍यो। रामेश्वर फुँयाल यस क्षेत्रका बहालवाला सांसद हुन्। यस क्षेत्रबाट एमालेले पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राईलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्का तथा बिपी संग्राहलय समितिका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १, ७, ८ र ३० तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ यो क्षेत्रमा पर्छ।
यहाँबाट कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा चुनाव लड्दै आएका छन्। उनले भारी मतान्तरले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित पनि गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रबाट यसपटक पनि गगन थापा मैदानमा उत्रिँदै छन्। एमालेबाट सांसद राजन भट्टराईको नाम सिफारिस भएको छ।
यो क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ५, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ७ तथा टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५, ६ र ७ पर्छ। यहाँबाट कांग्रेसका नरहरि आचार्यले चुनाव जित्दै आएका छन्।
यद्यपि, यसपटक उनको नाम सिफारिसमा परेको छैन। अर्कोतर्फ एमालेले पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ।
नरहरि मैदानमा नहुँदा पोखरेललाई चुनाव जित्न केही सहज हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा स्थानीय तहमा प्राप्त मतले पनि वाम गठबन्धन नै अघि रहेको देखाउँछ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २६, २७ र २८, तारकेश्वर नगरपालिकाको १, २, ६, ७, ८, ९, १० र ११ तथा टोखा नगरपालिका १, ८, ९, १० र ११ मिलेर यो क्षेत्र बनेको छ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका हितमान शाक्य विजयी भएका थिए। २०७० मा शाक्य निर्वाचन बहिष्‍कारको पक्षमा रहे। त्यतिबेला कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले बाजी मारे। उनले एमाले तथा माओवादीका युवा नेताद्वय योगेश भट्टराई र हिमाल शर्मालाई पराजित गरेका थिए।
यस क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६, १७, १८ र २५, नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ समेटिएको छ।
यस क्षेत्रबाट २०६४ मा तत्कालीन माओवादीकी हिसिला यमी तथा २०७० मा एमालेका रामवीर मानन्धर विजयी भएका थिए। अहिले दुवै एउटै गठबन्धनमा छन्। दुवैपटक वामपन्थी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले जितेको यो क्षेत्रमा यसपटक को उम्मेदवार बन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३, १५, १९, २०, २३ र २४ तथा नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ यो क्षेत्रमा पर्छ। यहाँबाट कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले चुनाव जित्दै आएका छन्।
यसपटक पनि उनी नै उम्मेदवार बन्दै छन्। एमालेबाट जिल्ला सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ वा केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठमध्ये एक उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा पनि वाम गठबन्धन केही अघि रहेको देख्न सकिन्छ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १२, १४, २१ र २२, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नम्बर १, १२, १३, १४ र १५ तथा नागार्जुन ६, ७, ८, ९ र १० पर्दछ।
यस क्षेत्रबाट संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जित विजयी भएका थिए। यसपटक पनि उनै रञ्जित र महासमिति सदस्य दामोदर गौतमको नाम कांग्रेसबाट चर्चामा छ। एमालेले ३ नम्बर प्रदेश कमिटी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य वा जिल्ला सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठमध्ये १ लाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा पनि वाम गठबन्धन झण्डै ५ हजार मतले अघि रहेको देख्न सकिन्छ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जितेका थिए। २०७० मा प्रचण्ड यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका राजन केसीसँग पराजित भए। केसी अहिले युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्। कांग्रेसबाट केसी नै यसपटक पनि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ।
गठबन्धनबाट को उम्मेदवार बन्ने भन्ने निधो भइसकेको छैन। स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको यही क्षेत्र हो। यस क्षेत्रबाट एमालेभन्दा कांग्रेसले बढी मत ल्याए पनि माओवादीको मत जोड्दा कांग्रेस/राप्रपाभन्दा वामपन्थी गठबन्धन निकै अगाडि देख्न सकिन्छ।
काठमाडौं यस्तो ठाउँ हो जहाँ हमेसा जनमत तलमाथि भइराख्छ। माथिको तथ्याङ्क हेरेर सबै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले नै जित्छ भन्न सकिन्न।
किनकी यहाँ कांग्रेसबाट जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव जित्दै आएका नेताहरुसमेत मैदानमा छन्।
यद्यपि, यसबाट के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने, काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक कडा प्रतिस्पर्धा हुनेवाला छ। काठमाडौं १ बाट प्रकाशमान, २ बाट माधव नेपाल र ४ बाट गगन थापाले समेत जितका लागि संघर्ष गर्नुपरे अचम्म नमान्दा हुन्छ। थाहाखबर